Beddelaan M4V in MP4 ugu dhaqsaha badan oo si fudud ku Mac / Win (hab xor ah ka mid ah)
Waxaa laga yaabaa adag tahay in aad daawan Lugood M4V file on telefoonada Android, PSP, ama wax ka bedel Madaxweyne Siilaanyo Oo ah video Lugood M4V in iMovie, Final Cut Pro, tan iyo waxyaabaha M4V iibsaday Lugood waa nuqul la dhawray. Si loo xaliyo dhibaatadaada, waxaad si fudud u bedeli karaan M4V in MP4 la Converter video talinayaa in maqaalka ah. MP4 waa qaabka video ugu caansan oo ay taageerayaan ciyaartoy badan, qalab video tafatirka iyo qalabka ciyaarta. Diinta M4V videos in videos MP4 awood aad ku heli doonaan sida ugu badan uga aad files M4V.
Qeybta 1: Best M4V in Converter MP4 for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
Qeybta 2: M4V Free in Converter MP4
Qeybta 3: Online M4V in Converter MP4
Qeybta 4: Su'aalaha ku saabsan diinta M4V Files
• Beddelaan iibsaday Lugood M4V filimada in MP4 iyo qaabab loo jecel yahay oo kale oo aan transcoding.
• presets filaayo in loo maqli karo si sahlan ku iPad, Samsung, YouTube iyo HTC, iyo in ka badan.
• muuqaalada video tafatirka awood leh sida falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isagoo intaa ku daray Cinwaan iyo saamaynta, iwm
• Beddelaan M4V in DVD la arrimo menu dhisay-in, la abuuro DVD xirfadle.
• Beddelaan files ee ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan contemporaries.
Hagaha hoos ku qoran wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo badalo iibsaday Lugood M4V in MP4 for Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad rabto in aad hesho M4V ah in Converter MP4 for Mac (Yosemite ka mid ah), fadlan guji kaliya halkan .
Tallaabada 1 Load M4V files si M4V in ay MP4 video Converter
Guji "Add Files" icon ku darto files aad M4V ka desktop fayl kale. Ama si fudud u jiidi faylasha M4V si toos ah u furmo suuqa barnaamijka. Ka dib markii dhammaan waxyaabaha video laga keeno, waxaad iyaga ku eegaan karo screen saxda ah. Haddii video clip ma aha xaq, kaliya ku dhacay "Delete" si meesha looga saaro shayga.
Tallaabada 2 Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo liiska hoos-hoos qaabka. Dooro "MP4" ka "Qaabka"> "Video".
Haddii aad dooneyso inaad koobin ee audio ama video waayo-aragnimo dheeraad ah oo loo maqli karo raaxo, riix "Settings" doorasho si ay u helaan suuqa kala goobta. Heerka Inyar, heerka jir ah, xallinta, channel waa xor ah hagaajin karo.
Tallaabada 3 shakhsiyeeyo wax soo saarka aad video (optional)
Tani Converter Video sidoo kale waxay bixisaa feature tafatirka fududahay in laguu ogolaado in aad taaban ilaa wax soo saarka aad video goobtii. Hawlaha tafatirka Common waxaa la siiyaa, oo ay ku jiraan abuurka, falinjeeerka, saamayn, watermark ama subtitles.
Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Converter Lugood M4V si loogu badalo M4V in qaab DVD adigoo gujinaya tab gubatay on sare ee interface ka. Ka dibna riix "Chang Template" in ay doortaan aad template menu jecel. Sidaas, waxaad samayn kartaa DVD ah oo khibrad leh.
Tallaabada 4 Beddelaan Lugood M4V in MP4
Marka dhan dejinta qanacsan, kaliya ku dhacay "Beddelaan" badhanka si ay u soo iibsatay Lugood M4V in MP4. Barnaamijkan waa wax ku ool ah oo bar horumarka waqtiga inta hadhay ku tusi doono. Taasi waa! Hadda waxaad ku raaxaysan kartaa files M4V wakhti kasta, meel kasta. Great shaqo!
M4V Free in Converter MP4: Wondershare Free Video Converter
Ha kartaa in aad lacag la'aan ah loogu badalo M4V (DRM ilaaliyo ma taageersana) si MP4 ee habka deg deg ah.
Pro: gabi ahaanba free video Converter, fududahay in la isticmaalo
1. Version ayaa lacag la'aan ah ma u bedeli karaan si 3D iyo HD. Waxa kaliya ee u bedeli karaan si caadi ah videos.
2. Waa kuma aha ee "badalo si horena" hidi.
3. The tayada wax soo saarka video ma aha in lagu qanci karo.
4. Waxaad aan u bedeli karaan M4V in DVD la M4V lacag la'aan ah si aad u Converter MP4.
1. Su'aal: Waxaan kaliya magaca karaa kordhin file ka M4V in MP4?
Waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood u shaqeeyaan, laakiin waa run ahaantii qatar ah. qaab-dhismeedka file asalka laga yaabaa jebiyey, oo ma waxaad ka heli doontaa video tayada saxda ah ee aad markii hore lahaa. Sidaas, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan a video Converter adag si loogu badalo files la soo saarka tayo sare leh iyo xawaaraha ultrafast.
2. Su'aal: Maxaad u badalo M4V in MP4, macluumaad dheeraad ah?
Xudduudka ah M4V:
M4V waa MPEG 4-kordhin file loo isticmaalo videos bixi ama ka iibsaday dukaanka Apple Lugood, oo ay ku jiraan filimada, bandhigyada TV ama videos music. Waxaa la mid ah file MP4 ah, laakiin waxaa laga yaabaa in aad nuqulka-ilaaliyo iyadoo la isticmaalayo ilaalinta copyright FairPlay DRM Apple ee. Alaabada soo bixi Lugood, sidoo kale iyaga waxaad ka ciyaari kartaa la QuickTime ama VLC ka sokow waxyaabaha Apple, sida iPhone, iPod, iPad, iwm, laakiin waxyaabaha iibsaday ka Lugood, kaliya iyaga waxaad ka ciyaari kartaa qalabka Lugood ama macruufka in DRM ku mahad oggolaansho. caanka ah MP4, MP4 waa kordhin filename rasmi ah MPEG-4 Qaybta 14. Waxaa inta badan la isticmaalo in uu kaydiyo video digital iyo durdurrada audio digital, gaar ahaan kuwa ku qeexan MPEG, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in uu kaydiyo xogta kale sida subtitles oo weli sawirada. Waxay noqon kartaa mid taageero kala duwan oo ka mid ah ciyaartoyda digital, sida iPod, iPhone, PSP, Archoes, Madaxweyne Siilaanyo, iRiver, Zune, qalab video tafatir sida iMovie, Final Cut Pro, Adobe jilitaankii Pro, telefoonada gacanta sida Android, Blackberry, HTC, iwm .
3. Su'aal:? Ma isticmaali karaa gacan-jabis oo lacag la'aan ah loogu badalo M4V in MP4
gacan-jabis saari karin DRM sida la xusay ay page, si DRM diinta ilaaliyo M4V in MP4 aan macquul noqon doonaa. Waxaad isku dayi kartaa Video Converter Ultimate.
Ma doonaysaa in aad hesho video tayada wax soo saarka wanaagsan ee aad M4V video? Isku day Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
Ka QuickTime plugin inay Play Video iyo Audio More
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan M4V in MP4